जो ठाउँ राम्रो यो आविष्कार गर्ने देश भन्दा पिज्जा रमाइलो गर्न, दायाँ? इटालियनहरू प्रेम, प्रेम, यो स्वादिष्ट खाजा-गरिएका-भोज प्रेम! इटाली कुनै आश्चर्य pizzas कला शुद्ध फारम मा गरिएका छन्, र अन्तमा यूनेस्को-अनुमोदित छन्! इटाली वरिपरि रोमिङ, you’ll find pizzerias opened in…
तपाईं एक एकल यात्री हो र तपाईं एक nomad रूपमा यात्रा तालिम गर्न चाहनुहुन्छ भने, त तपाईं सही ठाउँमा छौं. तपाईं युरोप प्रस्ताव छ सबै अनुभव गर्न चाहनुहुन्छ भने रेल परिभ्रमण युरोप मार्फत यात्रा गर्न सबै भन्दा राम्रो तरिका को छ. हुन…
हरेक साँचो रक्सी प्रेमी भनेर युरोप मा रक्सी शहर किफायती र अचम्मको रक्सी प्रस्ताव थाह. फ्रान्स ले इटाली, र थप, यी देशहरूमा संसारमा सबै भन्दा राम्रो वाइन गर्न धेरै द्वारा पहिचान गर्दै. अांशिक रुपमा, this is due to the ideal climate growing…
त्यहाँ अर्को बिहान एक बिस्तारै सार्ने रेल मा सुतेको झर्ने र आफ्नो गन्तव्य मा उठ्दै भन्दा कुनै राम्रो भावना छ, को ढलान बाट मात्र मिनेट. यूरोपमा, रेलबाट यात्रा गर्नका लागि सर्वश्रेष्ठ स्की रिसोर्टहरू खोज्दा हामी छनौटको लागि खराब गर्दछौं. It’s not…
कहीं यात्रा सधैं अचम्मको छ र हामी यसलाई सुन्दर शहर पत्ता लगाउन के, एक देश वा संस्कृतिका इतिहास हाम्रो बाट धेरै फरक. तथापि, तपाईं सुन्दर ठाउँहरू पत्ता लगाउन घर देखि टाढा जाने छैन. There areafew European train tours…
छुट्टीको गन्तव्य रूपमा इटाली बारेमा सबै भन्दा राम्रो कुराहरू एक यो आफ्नो बाल्टिन सूची बन्द तपाईं बस सोचो कुरा हो. तपाईंले यो सुरम्य भूमि र यसको स्वादिष्ट भाडा को पर्याप्त छैन फेरि र फेरि र अझै पनि इटाली फर्कन सक्नुहुन्छ, nor…